प्लस साइज भएकी मोडललाई चाहियो दुलाहा ! उनीसँग विवाह गर्नेले पाउँनेछन् करोडौँको सम्पति ! – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २६, २०७५१२:५६0
एजेन्सी,२६ असोज । उमेरमा नै विवाह गर्नु उचित हुन्छ । तर कतिपयले भने जस्तै समयमा नै आफ्नो जीवन साथी पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तै आज हामी तपाईहरुलाई विवाह गर्ने मन हुँदा हुँदैपनि जीवन साथी पाउन नसकेकी एक युवतीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जसले आफुसँग विवाह गर्नेलाई निकै ठूलो सम्पति दिने घोषण समेत गरेकी छन् ।
चर्चित मोडल तथा अभिनेत्री ऐनाले आफुले विवाह गर्नको लागि सोचेजस्तोे केटा नभेटेको बताएकी छन् । उनले आफुलाई विवाह गर्ने ठूलो रहर भएको बताउँदै विवाह गर्न चाहने दुलाहलाई ६५ करोड बराबरको सम्पति दिने घोषणा गरेकी छन् । तर अहिलेसम्म उनीसँग विवाह गर्न कोही राजी भएका छैनन् ।
उनले निकै अनौठो सर्त राखेकी छन् जसको कारण उनले गरेको प्रस्ताव अस्विकार गरेको हु सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीसँग विवाह गर्नको लागि भारतीय विवाहीत पुरुष हुनुपर्ने उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलासा गरेकी छन् । पछिल्लो समय उनलाई सामाजिक सञ्जालमा थुप्रैले फलो गर्न थालेको देखिएको छ ।